Mpanakanto mahay indrindra ao amin'ny indostrian'ny K-POP tamin'ny 2021 - Pop-Kolontsaina
Mpanakanto mahay indrindra ao amin'ny indostrian'ny K-POP tamin'ny 2021
Ireo mpanao feo mahay dia tsy sarotra alefa ao amin'ny Indostria K-POP , fa noho ny tototry ny talenta, ny fahitana ny tsara indrindra dia manaporofo fa asa sarotra. Ny sampy maro dia afaka mitazona ny azy amin'ny fifaninanana am-peo miady amin'ireo veteransan'ny indostrian'ny mozika, amin'ny fiheverana ny fiofanana henjana sy ny asa mafy ataon'izy ireo mba hahafehy ny fahaiza-manao.
Eto izahay dia nanangona lisitry ny K-POP sampy izay nanana ny fahaizany nohajaina eraky ny indostria ary noderain'ny any ivelany aza.
Fialana andraikitra: Ity lisitra ity dia tsy mitombina amin'ny fomba rehetra, ary mifototra amin'ny hevitry ny mpanoratra fotsiny. Izy io koa dia tsy misy laharana ary isaina ho an'ny tanjon'ny fandaminana.
Mpanakanto tsara indrindra ao amin'ny indostria K-POP hatramin'ny 2021
1. Hwasa an'ny Mamamoo
Lahatsoratra zarain'i HWASA (@_mariahwasa)
asa lavorary ho an'ny olona mangoraka
Lisitra iray ahitana ireo mpiangaly feo K-POP tsara indrindra dia tsy mahatsapa ho feno raha tsy Hwasa, a.k.a Ahn Hye-jin. Ity mpihira 25 taona ity dia nanomboka tamin'ny naha mpikambana azy tao amin'ny vondrona tovovavy mpikambana 4 an'ny RBW, Mamamoo tamin'ny 2014 ary natanjaka hatrany izy hatrizay. Malaza ho malaza amin'ny feony tsy manam-paharoa izy, izay matetika nofaritana ho lalina sy marokoroko.
Hwasa dia niara-niasa tamin'ny kintana pop Dua Lipa ho an'ny remix amin'ilay hiran'ity farany 'Physical.' Izy koa dia nisongadina tamin'ny làlana niaraka tamin'ireo mpanakanto Koreana fanta-daza ivelan'ny indostria K-POP, toa an'i Loco, Palo Alto, Live DPR , Uhm Jung Hwa, ary K.Will.
Tamin'ny taona 2020, izy no nahazo ny laharana voalohany tamin'ny seho fifaninanana fihirana Koreana Tatsimo, 'Hidden Singer.'
2. D.O an'ny EXO
Lahatsoratra zarain'i D.O. EXO (@overdokyungsoo)
D.O an'ny Doh Kyung-soo dia nandoka fiderana avy amin'ny lafivalon'ny indostria noho ny talentany am-peo. Tsy nahagaga fa nandresy tamin'ny fifaninanana fihirana izy tamin'ny 2010 tamin'ny faha-17 taonany - ny hafa kosa dia nanosika azy hanao audition ho an'ny SM Entertainment taorian'ny fandreseny, ary tonga tany amin'ny EXO izy, ary mbola mpikambana ao ihany izy.
Fantatra amin'ny maha-mpilalao azy ihany koa ity mpihira ity, saingy maro no tsy mahazaka ny feony malefaka dibera sy tsy misy ezaka. Nandritra ny raharaha miaramila tsy maintsy nataony dia nandray anjara tamin'ny mozika tantanan'ny tafika izy.
Ilay sampy K-POP manana talenta marobe dia efa nihira hira iray manontolo tamin'ny teny espaniola ihany koa, ary hamoaka hira espaniola ao aminy ho avy ny solo voalohany EP atsy ho atsy .
3. Rosé an'ny BLACKPINK
Lahatsoratra iray nozarain'i ROSÉ (@roses_are_rosie)
Ireo mpankafy sy ireo tsy mpankafy ny BLACKPINK dia samy hahafantatra izany Pink Feo ao am-po, noho ny fanananao ny iray amin'ireo loko miavaka indrindra amin'ny indostria. Tamin'ny faha-15 taonany dia nanao «audition» ho an'ny YG Entertainment izy tamin'ny 2012 ary laharana voalohany tamin'ireo mpandray anjara 700 hafa.
Nasongadiny tamin'ny feon-kira G-Dragon ilay hira hoe 'Tsy misy anao', tamin'io taona io ihany. Izany dia nitarika tamin'ny fanarahan-dia maro ny asany sy ny fijerena azy na dia talohan'ny nahatongavany ho mpikambana BLACKPINK tamin'ny 2016 aza.
Vao tsy ela akory izay, ilay mpihira K-POP dia notoloran'i John Mayer gitara avy eo am-pitanany ny hirany 'Slow Dancing in a Burning Room.'
4. Taeyeon an'ny Zatovovavy / SNSD
Lahatsoratra zarain'i TaeYeon (@taeyeon_ss)
leo ny vehivavy hafa mitanisa
Taeyeon dia raisina ho iray amin'ireo mpandahatra feo mahay indrindra amin'ny indostrian'ny mozika koreana. Nokarohina tao amin'ny masoivoho misy azy (SM Entertainment) izy taorian'ny nahazoany ny laharana voalohany tamin'ny fifaninanana fihiranana nataon'izy ireo. Niditra tamin'ny filaharana ho an'ny Girl's Generation ihany izy tamin'ny farany ary nanomboka ny laharam-pahamehana tamin'ny taona 2007, amin'ny maha-mpitarika ny vondrona tovovavy K-POP azy.
Taeyeon dia nanana famoahana rakikira solo maromaro, amidy amina albumie ara-batana maherin'ny 1 tapitrisa. Nampindrana ny feony amin'ny tantara an-tsehatra OST izy ary nihira ' Ho any amin'ny tsy fantatra 'ho an'ny famoahana Koreana ny sarimihetsika mihetsika 3D' nivaingana . '
Park Jin-young, mpanorina ny JYP Entertainment, dia nanambara teo aloha fa maniry hiara-hiasa amin'ilay mpihira izy.
5. Eunkwang an'ny BtoB
Lahatsoratra zarain'i 서 은광 (@btob_silver_light)
Eunkwang na Seo Eun-kwang dia mpihira ao amin'ny tarika zazalahy kely K-POP an'ny Cube Entertainment izay mpikambana 5, BtoB. Raha tsy ampy hanaporofoana ny talentany am-peo ny fakana mozika azo ampiharina dia nandray anjara tamina teatra mozika mozika marobe koa ny 30 taona, anisan'izany ny Hamlet SY Musketeer telo .
Niseho tamina mpifaninana tamin'ny seho isan-karazany mozika izy, anisan'izany ny Fifaninanana fihirana nasionaly, Mpanjakan'ny mpihira sarontava, Duet Song Festival, hira tsy mety maty 2 sy ny hafa.
Eunkwang dia nahazo dera tsy tambo isaina tao amin'ny indostrian'ny K-POP noho ny fampisehoana an'i So Chan-whee's ' ranomaso , 'hira iray izay noheverina ho sarotra tokoa noho ny fiovana avo lenta izay na ny vehivavy nampiofana feo aza dia sahirana manao azy.
rehefa misy bandy tsy miditra aminao
Ahoana no ahafantaranao raha manana olana fandaozana
Te handositra aho ary hanomboka fiainana vaovao
aiza ry zareo izao no mitolona
ahoana ny faniriana fatratra amin'ny fiainana